Uncategorized Archives - ApannPyay Media
ကုဋီ (အိမ်သာ) ဆေးကြော သန့်စင်ခြင်း အကျိုး( ၁၁ )ပါး
April 4, 2022 by ApannPyay Media
ကုဋီ (အိမ်သာ) ဆေးကြော သန့်စင်ခြင်း အကျိုး( ၁၁ )ပါး ၁။ မိမိစိတ်လည်းကြည်လင်စေ၍ သူတစ်ပါးစိတ်ကိုလည်းကြည်လင်စေခြင်း။ ၂။ ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့၏ ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရခြင်း။ ၃။ ဖြစ်ရာဘဝတွင် ချော့မွတ်နုညံ့သောအသားရေနှင့်ပြည့်စုံခြင်း။ ၄။ ခန္ဓာကိုယ်သည် ပန်းရနံ့ကဲ့သို့မွှေးပျံ့သောအနံ့ရှိခြင်း။ ၅။ မျက်နှာအဆင်းကြည်လင်ခြင်း။ ၆။ စိတ်ညစ်ညူးဖွယ်ရာများနှင့်မကြုံရခြင်း။ ၇။ စိတ်ချမ်းသာသဖြင့် ကျန်းမာရေးလည်းကောင်းခြင်း။ ၈။ ပညာဉာဏ်ကြီးခြင်း။ ၉။အသက်ရှည်ခြင်း။ ၁၀။ မတွေမဝေသေရခြင်း။ ၁၁။သေပြီးနောက်သုဂတိသို့လားရခြင်း ဟူသောအကျိုး( ၁၁ )ပါးသည် ကုဋီဆေးကြောသန့်စင်ရခြင်း၏ အကျိုးပေတည်း။ ( အင်္ဂုတ္တိုရ်၊ဧကာဒသကနိပါတ် ) အနာရောဂါကင်းရခြင်းရဲ့အကြောင်း မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်မှာ မထေရ်မြတ်တစ်ပါး ရှိခဲ့ဘူးပါတယ် ထိုမထေရ်ဟာ အနာရောဂါ ဘယ်လောက်များ ကင်းသလဲဆိုရင်´´ဟက်ချီုး “ဆိုတဲ့ နှာတောင် မချေဘူးဘူးတဲ့ ရောဂါကင်းလိုက်ပုံများ လောကမှာ ဘယ်ဟာမှအကြောင်းလွတ်ပြိး အကျိုးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာ … Read more
ကလေးလေးတစျယောကျ အနားရောကျလာပီး ကိုကွီးအမှိုကျပစျအုံးမလားတဲ့ မပစျတော့ဘူးလို့ပွောလိုကျသောအခါ
February 19, 2022 by ApannPyay Media
မိဘအတွက် ဆန်ဝယ်ပေးချင်လို့ရပ်ကွက်ထဲက အမှိုက်တွေကို စက်ဘီးလေးနဲ ့သယ်ပေးနေတဲ့ ကလေးငယ် ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းနဲ့အအေးဆိုင်ထိုင်နေတုန်း ကလေးလေးတစ်ယောက်ရောက်လာပီး ကိုကြီး အမှိုက်ပစ်အုံးမလားတဲ့ မပစ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ သားက အိမ်အတွက် ဆန်လေးဝယ်ချင်လို့တဲ့ အဲ့တာနဲ့ ကျွန်တော်ကလည်း ညီလေးထိုင်ပါအူံးလို့ပြောပီး ကျွန်တော်က မေးလိုက်တယ်….ညီလေး ဘာစားပြီးပြီလဲ မေးတော့ သားက အသုပ်စားလိုက်တယ်တဲ့ အဲ့တာနဲ့ ကျွန်တော်ကလည်း ထပ်စားချင်သေးလဲမေးတော့ မစားတော့ပါဘူးဆိုပီး ကျွန်တော် ကလေးအတွက် မိုင်လိုတစ်ခွက် မှာပေးပီး သူအကြောင်းတွေကိုမေးတော့ အဖေနဲ့အမေက ချောင်းထဲက ဘူးခွံပုလင်းတွေကောက်တာတဲ့ ဒီနေ့ကမရလို့ သားက အမှိုက်လိုက်သွန်ပီး အိမ်အတွက်ဆန်ဝယ်ပေးမလို့ဆိုပီးထွက်လာတာ သူစီးတဲ့စက်ဘီးလေးကလည်း ဘီးကပေါက်နေပီး ချိန်းကပြတ်နေတယ် ကျွန်တော်ကလည်း စက်ဘီးဆိုင်ကိုသွားပီး ဘီးဖာပေးလိုက်ပီးချိန်းကြိုးပြန်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ပြန်တော့ ကလေးအတွက် ဆန်တစ်ပြည်၊ဆီတစ်ဗူး၊ကြက်ဥ၁ဝလုံး မုန့်ဖို့းတစ်ထောင်ပေးလိုက်တယ်… ဆိုင်ရှင်ကလည်း လျော့ပေးပါတယ် ကျွန်တော်တို့လှူမှန်းသိတော့ … Read more
အော်တိုဂီယာကား မောင်းနှင်သူများ တောင် တက်/ဆင်း ခရီးသွားရာတွင် သိသင့်သော အချက်များ
February 5, 2022 by ApannPyay Media
အော်တိုဂီယာကား မောင်းနှင်သူများ တောင် တက်/ဆင်း ခရီးသွားရာတွင် သိသင့်သော အချက်များ အော်တို ဂီယာအသုံးပြုသူများ မြင့်မားသော တောင်အတက်များတွင် အဲယားကွန်း မဖွင့်ပါနှင့်၊ တောင်တက်ရန်အတွက် Second ဂီယာဖြစ်သော S,2တို့ဖြင့်သာ တောင်တက်ပါ… D သာပါသော အော်တိုကားများတွင် Manual ပြောင်း၍ တက်သင့်ပါသည်… ဒီဇယ် Pickup ကားများနှင် Manual ဂီယာသုံး အိမ်သုံးကားငယ်များတွင် ဂီယာကို ကြိုဒေါင်းပါ… မနိုင်သောဂီယာနှင့် အတင်းဆွဲတက်ပါက Manual ဂီယာကားများတွင် ကလပ်ပလိတ်ပြား မျက်နှာပြင်များ ချော်တတ်ပါသည်။ မြင့်မားသော တောင်အဆင်းတွင်လည်း အော်တိုဂီယာဖြစ်စေ Manual ဂီယာဖြစ်စေ… ဂီယာကြီးဖြစ်သော S,2စသော ဂီယာကြီးဖြင့် အနည်းဆုံးဆင်းပါ…။ အဆင်းရှည်သော တောင်ဆင်းများတွင် ဂီယာအသေးဖြစ်သော … Read more
January 25, 2022 by ApannPyay Media
တက်တူးထိုးစရာမလိုအတုတပ်စရာမလိုမျက်ခုံးမွေးပါးနေလို့မပူနဲ့မျက်ခုံးမွေးကိုထူထူလေးဖြစ်လာစေမဲ့နည်းလမ်း လှပပြီးခပ်ထူထူလေးရှိတဲ့မျက်ခုံးမွှေးမျိုးကိုပျိုမေတိုင်းလိုချင်ကြတယ်မဟုတ်လားအခုခောတ်ဆိုရင်မျက်ခုံးမွှေးကိုTattooထိုးတာတွေတောင်လုပ်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သဘာ၀မျက်ခုံးမွှေးအလှနဲ့မယှဉ်နိုင်တာကို တော့ငြင်းပယ်လို့မရပါဘူးနော်အရည်အသွေးညံ့တဲ့မိတ်ကပ်တွေလိမ်းတာကြောင့်လည်းမျက်ခုံးမွှေးပါးလာစေပါတယ်မျက်ခုံးမွှေးထူထူလေးရဖို့သဘာဝအတိုင်းမိမိအိမ်မှာအလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါ EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com တယ်ပါဝင်ပစ္စည်း၁။သံလွင်ဆီ၂။သံပုရာသီးတစ်စိပ်ပြုလုပ်နည်း၁။သံပုရာသီး တစ်စိပ်ကိုခွက်တစ်လုံးထဲထည့်ပြီးသံလွှင်ဆီစားပွဲတင်ဇွန်း၄ဇွန်းကနေ၅ဇွန်းထိ ထည့်ပါ၂။အဲဒီနောက်ပန်းကန်ပြားတစ်ချပ်နဲ့အုပ်ပေးထားပြီး၅ရက်လောက်ထားပါ၃။အဲဒီအရည်ကိုမျက်ခုံးမွှေးပေါ်ညတိုင်းလိမ်းပေးပါ၄။တစ်ညလုံးထားရင်ပိုကောင်းပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုး၃ပတ်၄ပတ်လောက်လုပ်ပေးပါပထမ၁၀ရက်အတွင်းသိသာတဲ့ရလဒ်ကောင်းကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် တက္တူးထိုးစရာမလိုအတုတပ္စရာမလိုမ်က္ခုံးေမြးပါးေနလို႔မပူနဲ႔မ်က္ခုံးေမြးကိုထူထူေလးျဖစ္လာေစမဲ့နည္းလမ္း လွပၿပီးခပ္ထူထူေလးရွိတဲ့မ်က္ခုံးေမႊးမ်ိဳးကိုပ်ိဳေမတိုင္းလိုခ်င္ၾကတယ္မဟုတ္လားအခုေခာတ္ဆိုရင္မ်က္ခုံးေမႊးကိုTattooထိုးတာေတြေတာင္လုပ္လာၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ဒါေပမဲ့သဘာ၀မ်က္ခုံးေမႊးအလွနဲ႔မယွဥ္နိုင္တာကို ေတာ့ျငင္းပယ္လို႔မရပါဘူးေနာ္အရည္အေသြးညံ့တဲ့မိတ္ကပ္ေတြလိမ္းတာေၾကာင့္လည္းမ်က္ခုံးေမႊးပါးလာေစပါတယ္မ်က္ခုံးေမႊးထူထူေလးရဖို႔သဘာဝအတိုင္းမိမိအိမ္မွာအလြယ္တကူျပဳလုပ္နိုင္မဲ့နည္းလမ္းေလးကိုမၽွေဝေပးသြားမွာျဖစ္ပါ EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com တယ္ပါဝင္ပစၥည္း၁။သံလြင္ဆီ၂။သံပုရာသီးတစ္စိပ္ျပဳလုပ္နည္း၁။သံပုရာသီး တစ္စိပ္ကိုခြက္တစ္လုံးထဲထည့္ၿပီးသံလႊင္ဆီစားပြဲတင္ဇြန္း၄ဇြန္းကေန၅ဇြန္းထိ ထည့္ပါ၂။အဲဒီေနာက္ပန္းကန္ျပားတစ္ခ်ပ္နဲ႔အုပ္ေပးထားၿပီး၅ရက္ေလာက္ထားပါ၃။အဲဒီအရည္ကိုမ်က္ခုံးေမႊးေပၚညတိုင္းလိမ္းေပးပါ၄။တစ္ညလုံးထားရင္ပိုေကာင္းပါတယ္။အဲဒီလိုမ်ိဳး၃ပတ္၄ပတ္ေလာက္လုပ္ေပးပါပထမ၁၀ရက္အတြင္းသိသာတဲ့ရလဒ္ေကာင္းကိုရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္
မျှစ်ခြောက်ကို ဘာလုပ်စားရမှန်း မသိသူတွေအတွက် အရသာအသစ် ရရှိစေမယ့် မျှစ်ခြောက်ထောင်း
January 22, 2022 by ApannPyay Media
မျှစ်ခြောက်ကို ဘာလုပ်စားရမှန်း မသိသူတွေအတွက် အရသာအသစ် ရရှိစေမယ့် မျှစ်ခြောက်ထောင်း မျှစ်ခြောက်ထောင်း.. တကယ်ကို အရသာအသစ် ရရှိစေမယ့် မျှစ်ခြောက်ထောင်းကို တစ်ခါလောက် စမ်းပြီးလုပ်စားကြည့်ပါ.. အလွန်စားကောင်းတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ရရှိစေမှာပါ.. မျှစ်ခြောက်ပါ နှစ်ကြိမ်ပြုတ်ရပါမယ်။ ပထမတစ်ကြိမ်ပြုတ်ပြီး ရေသွန်ပစ်ပါ။ ဒုတိယတစ်ကြိမ်ပြုတ်ပြီး ရေသွန်ပစ်ပါ။ ပြီးရင် ရလာတဲ့ မျှစ်ခြောက်ကို ရေဆေးပါ။ ပြုတ်ပြီး ရေဆေးထားတဲ့ မျှစ်ကို အဖတ်သေးသေးလေးဖြစ်သွားအောင် ကတ်ကြေးနဲ့ ညှပ်ပါမယ်။ ငရုတ်သီးစိမ်း ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ဆား ၊ အရသာမှုန့် ကို ညှပ်ထားတဲ့ မျှစ်ပမာဏကို ကြည့် သင့်သလို ထည့်ပြီး ထောင်းပါမယ်။ ဒီလောက်အနေအထားဆို ထောင်းတာရပါပြီ။ ပြီးရင်မျှစ်ထည့်ပြီး ထောင်းပါမယ်။ ထောင်းပြီးရင် ပန်းကန်ထဲထည့် ပဲဆီမွှေးမွှေးလေး ဆမ်းလိုက်လို့ ရပါပြီ။ နံနံပင်နဲ့ … Read more
December 4, 2021 by ApannPyay Media
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိန်းမစကားနားထောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ယောကျ်ားမရှိပါဘူး အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိန်းမစကားနားထောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ယောကျ်ားမရှိပါဘူး ယောကျ်ားကိုမနိုင်လို့ လွှတ်ထားရပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ယောကျ်ားတွေပဲရှိတယ် အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ မိန်းမစကားနားထောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ယောကျ်ားမရှိပါဘူး..။ ယောကျ်ားကိုမနိုင်လို့ လွှတ်ထားရပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ယောကျ်ားတွေပဲရှိတယ်..။ မိန်းမ စကားအရမ်းနားထောင်နေလိုသင့်ကို သင့်friတွေမယားကြောက်လို့အမည်တပ်ပေမယ့်..၊ ဘာကြောင့် လဲ သင့်မှာသင့်မိသားစု သင့်ကလေးကိုငဲ့လို့ သင့် သင်friတွေနဲ့လျောက်မသွားတဲ့အခါ.. သင့်အမည်တပ်ခံရပေမယ့် သင့်ကလေးတွေဇနီးအတွက်တော့ ယောကျ်ားကောင်းဖြစ်နေမှာပါ..။ အချိန်တန် သင်နေမကောင်းအိုနာလာရင် သင့်ဇနီးနဲ့သင့်ကလေးတွေကပဲ သင့်ကိုအနီးကပ်စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်..။ မကောင်းတဲ့friအများစုကတော့ သင့်ကိုမယားကြောက်လို့အမည်တပ်လိမ့်မယ်..။ သင့်မိသားစုအတွက် သင်ဟာ ငါအဖေဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လို့ သားသမီးတွေဇနီးတွေရဲ့ချစ်ခြင်းခံရမှာပါ..။ အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ မိန္းမစကားနားေထာင္ပ်က္စီးသြားတဲ့ေယာက်္ားမရွိပါဘူး အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ မိန္းမစကားနားေထာင္ပ်က္စီးသြားတဲ့ေယာက်္ားမရွိပါဘူး ေယာက်္ားကိုမနိုင္လို႔ လႊတ္ထားရၿပီးပ်က္စီးသြားတဲ့ေယာက်္ားေတြပဲရွိတယ္ အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ မိန္းမစကားနားေထာင္ပ်က္စီးသြားတဲ့ေယာက်္ားမရွိပါဘူး..။ ေယာက်္ားကိုမနိုင္လို႔ လႊတ္ထားရၿပီးပ်က္စီးသြားတဲ့ေယာက်္ားေတြပဲရွိတယ္..။ မိန္းမ စကားအရမ္းနားေထာင္ေနလိုသင့္ကို သင့္friေတြမယားေၾကာက္လို႔အမည္တပ္ေပမယ့္..၊ ဘာေၾကာင့္ လဲ သင့္မွာသင့္မိသားစု သင့္ကေလးကိုငဲ့လို႔ သင့္ သင္friေတြနဲ႔ေလ်ာက္မသြားတဲ့အခါ.. သင့္အမည္တပ္ခံရေပမယ့္ သင့္ကေလးေတြဇနီးအတြက္ေတာ့ ေယာက်္ားေကာင္းျဖစ္ေနမွာပါ..။ အခ်ိန္တန္ … Read more
တိုက်ရိုက် Live ကြည့်ပြီး ချဲတိုက်ရအောင် ရှဲကြမယ်…
October 16, 2021 October 15, 2021 by ApannPyay Media
တိုက်ရိုက် Live ကြည့်ပြီး ချဲတိုက်ချိန်ရောက်ပြီဟေ့ တိုက်ရိုက် Live ကြည့်ပြီး ချဲတိုက်ရအောင် ရှဲကြမယ် တစ်လမှာ နှစ်ခါတောင် ကံစမ်းလို့ရတဲ့ ထိုင်းထီလာပြီနော်။ ပေါက်တိုင်း မြန်မာတွေများတယ်နော်။ ခုလည်း ရှယ်ပေါက်ကြပါစေဗျာ။ လှူနိုင်ကြပါစေ တန်းနိုင်ကြပါစေ ပေါက်နိုင်ကြပါစေဗျာ။ တိုက်ရို်က် Live ကြည့်ဖို့ ရှဲထားနော် ၃ နာရီဆိုတာနဲ့ ကိုယ်ရှဲထားတဲ့ထဲ အလွယ်တကူ ဝင်ကြည့်ရုံပဲမို့ တကူးတက အမောတကော လိုက်ရှာစရာမလိုတော့ဘူး။ ဘာထွက်သွားလဲဆိုပြီး မသေချာ မရေရာနဲ့ သူများလိုက်မေးစရာမလိုဘူး။ ဒီနေ့အတွက် ဘာဂဏန်းတွေ ထိုးထားကြသေးလဲ။ ရှိရင်လည်း ရက်နီးရင် ပေ့မှာ ဂဏန်းလာပေးကြဦး။ မင်မင်လည်းထိုးမလို့။ ထိုးတိုင်းမပေါက်လို့ တွက်လည်းမတွွက်တတ်လို့ အကြံပေးကြဦး။ အားလုံး ဒီလိုကာလမှာ ခံနိုင်ရည်ရှိစွာနဲ့ နေနိုင်ကြပါစေ။ အားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ နေ့ရက်တွေကို … Read more
October 10, 2021 by ApannPyay Media
လှည်းတန်းတစ်နေရာမှာကားကို ဗုံးပေါက်ကွဲတဲ့နေရာမှာ ကားရပ်ထားမိလို့ ကားမှန်၂ချက်နဲ့ ဘော်ဒီတစ်ခုလုံးထိသွားခဲ့တဲ့နေမျိုးအောင်ရဲ့ကား(ရုပ်သံ) အနုပညာ လောကမှာ လူငယ်ပီပီ ကြိုးစားချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေလက်ခံလာပြီး အောင်မြင်မှုလမ်းစမှာ ရောက်ရှိနေတာကတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းထိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ နာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင် နေမျိုးအောင်ရဲ့သားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဖေရဲ့အနုပညာသွေးတွေကြောင့်လည်း ခုလိုအချိန်တိုအတွင်းမှာ ပရိသတ်တွေလက်ခံရလောက်တဲ့အထိအောင်မြင်နေတာပါ။သူတို့ မိသားစုလေးဟာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေလည်းအားကျနေရတာပါ။ အမေဖြစ်သူကလည်း အာဗြဲစိန် facebook accနဲ့ ဟင်းချက်နည်းတွေတင်ပေးလေ့ရှိပြီး ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့အောင်မြင်နေတာပါ။သူကတော့မနေ့ကအပြင်သွားချိန်မှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့ထိတ်လန့်မှုတစ်ခုကိုလူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားခဲ့တာပါ။ သူကတော့ကိစ ္စတစ်ခုကြောင့်အပြင်သွားနေချိန် လှည်းတန်းတစ်နေရာမှာကားကို ရပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူက လှည်းတန်းမှာ Tatoo သွားထိုးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲ့ချိန်မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သွားခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ကားမှန်၂ချက်နဲ့ ဘော်ဒီတစ်ခုလုံးဗုံးထိသွားခဲ့တာပါ။ပရိသတ်ကြီးလည်း အပြင်သွားရင်ဂရုစိုက်ဖို့မှာရင်း ဗုံးထိခဲ့တဲ့ မင်းထိုက်ရဲ့ ကားထိခိုက်မှုvideoလေးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ Credit ဗီဒီယိုၾကည့္ရန္…. လွည္းတန္းတစ္ေနရာမွာကားကို ဗုံးေပါက္ကြဲတဲ့ေနရာမွာ ကားရပ္ထားမိလို႔ ကားမွန္၂ခ်က္နဲ႔ ေဘာ္ဒီတစ္ခုလုံးထိသြားခဲ့တဲ့ေနမ်ိဳးေအာင္ရဲ႕ကား(႐ုပ္သံ) အႏုပညာ ေလာကမွာ လူငယ္ပီပီ … Read more
၃ရက်အတွင်း မျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်တွေကို ပျောက်သွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်နည်း
October 4, 2021 by ApannPyay Media
၃ရက်အတွင်း မျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်တွေကို ပျောက်သွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်နည်း ၃ရက်အတွင်း မျက်နှာပေါ်က အမည်းစက်တွေကို ပျောက်သွားစေမယ့် လျှို့ဝှက်နည်းတစ်ခု မျက်နှာတစ်ခုလုံး အနာအဆာမရှိပဲ ကြည်လင်ဝင်းပချင်တာက အမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့ အိပ်မက်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေ မျက်နှာပေါ်မှာ အမဲစက်ကြီးတွေ မြင်နေရရင်ကို လူက စိတ်မကြည်မသာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေတောင် ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက် ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အတွက် စာရေးသူဆေးတစ်ခုရှာတွေ့ထားတယ်။ ခက်တယ်မထင်လိုက်နဲ့။ မီးဖိုချောင်မှာမွှေနှောက်ရှာလိုက်ရုံနဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ ရသွားမှာပါ။ အဲ့ဒါကတော့ အာလူးသံပုယို ရေခဲတုံးပါ။ သံပုယိုသီးမှာ အရည်ပြားကို လင်းပြီးဖြူလာစေပါတယ်။ အာလူးကတော့ အမည်းစက်တွေကို တိုက်ဖျက်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးရောထားတဲ့ စူပါရေခဲတုံးကတော့ အသားအရေကို ပြန်လည်နုပျိုစေတဲ့အပြင် အမည်းစက်တွေကို သိသိသာသာ သက်သာစေမယ့် အာနိသင်ပါဝင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ အာလူး -၁လုံး တလဲသီး- ပန်းကန်လုံး တစ်ဝက် သံပုယိုသီး- … Read more
ငွေစက္ကူ အသစ်တွေရိုက်ထုတ်ပြီး စစ်ကောင်စီ ဘဏ္ဍာငွေ ဖြည့်တင်းနေပြီ
September 1, 2021 by ApannPyay Media
ငွေစက္ကူ အသစ်တွေရိုက်ထုတ်ပြီး စစ်ကောင်စီ ဘဏ္ဍာငွေ ဖြည့်တင်းနေပြီ ကိုဗစ် ၁၉ နှင့် အာဏာသိမ်းမှု အကျိုးဆက်များကြောင့် အခွန်ငွေ ကောက်ခံမှုနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများ၏ ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုများ လျော့ကျနေ၍ လိုငွေပြလာသော ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို စစ်ကောင်စီက ငွေစက္ကူအသစ်များ ရိုက်နှိပ်ကာ ဖြည့်တင်းလျက် ရှိနေသည် ။ငွေစက္ကူအသစ်များ ရိုက်နှိပ်ပြီး ဘဏ္ဍာငွေ ဖြည့်တင်းခြင်းကို စစ်ကောင်၏ လက်အောက်ခံ ဗဟိုဘဏ်က တရားဝင်ထုတ် ကြေညာခြင်း မရှိသော်လည်း ယခု သီတင်းပတ်အစ ဩဂုတ်လ ၃၀ ရက် (လစာထုတ်ရက်) မှ စတင်ကာ ငွေစက္ကူ အသစ်များသည် ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှတဆင့် အများပြည်သူလက်ထဲသို့ ရောက်ရှိလာနေပြီ ဖြစ်သည်။ “အခွန်ကောက်လို့လည်း သိပ်မရဘူး၊ ထီလက်မှတ် ရောင်းတာလည်း မရောင်းရဘူး။ နိုင်ငံခြား … Read more